Ny efitra lamba dia fanekena ny finoana silamo | Apg29
Ny efitra lamba sy ny fitafiana izy ireo mijoro ho vavolombelona fa ny silamo.
A ankizivavy manao ny efitra lamba.
Rehefa lasa tanora ny vehivavy Zavatra silamo, izy ireo hitondra avy eo haingana ny silamo shawl. Tsy manao izany alohan'ny silamo izy ireo. Ny fehy na ny voaly dia toy izany no ho fiaiken-keloka fa ankehitriny izy ireo silamo sy ny an'ny finoana silamo.
Ny mahazatra sehatra an-dalambe
Raha velona koa Aho valo kilaometatra avy Forserum. Ao Forserum ela velona Silamo. Raha tonga any amin'ny Forserum hitako mivantana avy ny fiarako ny vehivavy silamo mandeha eny an-dalambe. Izy io dia toe-javatra mahazatra an-dalambe.
Ahoana no ahafahako mahafantatra fa misy vehivavy Silamo? Hitako izany amin'ny ny fitafiany. Manan-tava eo an-dohany sy ny akanjo feno. Mijoro ho vavolombelona ny fitafiany koa fa ny silamo izy ireo.
I mahita ny olona izay tsy manana izany fitafiany, tsy mihevitra aho fa satria ny silamo. Amin'ny teny hafa, ny fitafiana ny fiaiken-keloka fa silamo izy ireo. Ireo maneho amin'izao tontolo izao fa izy ireo Silamo.
Saròny ny volony sy ny tratrany
Izao no voalaza ao amin'ny CORAN fa ny vehivavy Silamo dia tokony manarona ny volony sy ny vata amin'ny shawl na ny efitra lamba. Fa toy izany mba hampisehoana fa ny silamo izy ireo mba tsy ho ny olona araka ny silamo vohikala islam.se handratra azy. Dia toy izany no hametaveta azy. Izy ireo dia mampiseho fa izy ireo tsy andevo na ny tsy mino fa maimaim-poana ho an'ny olona handratra sy ny fanolanana.
Quran: Ary lazao amin'ny vehivavy mino fa tokony hampidina ny fijeriny izy ary hiambina ny filahiany ary tsy mampiseho bebe kokoa ny haingo noho ny fanajana aseho mety ho hita maso; Koa aoka ireo no hanatona ny voaly (Khimar) ka dia anatinao ireo ...
Io andininy, isa 31 amin'ny toko faha-24 ny Quran, dia ny fototry ny amin'ny fanaovana ny efitra lamba. Rehefa mifanakalo hevitra momba izany silamo andininy miresaka momba ny teny Khimar nadika hoe "efitra lamba". Knut Bernström Mohammed nanoratra izany ao amin'ny fanamarihana ambany pejy ho an'ny andininy ao ny heviny ny Quran;
Ny teny Khimar (plur. Khumur) ny efitra lamba dia midika fa ny vehivavy Arabo taloha sy taorian'ny fahatongavan'ny ny finoana silamo teo amin'ny tantara efa zatra mifandray volo. Araka ny mahazatra ny ankamaroan'ny mpaneho hevitra ny efitra lamba tonta na latsaka kokoa haingo, famaritana ny mihantona nidina ny indray ary satria ny akanjo ny vehivavy eo ambany dia nanjaka lamaody Anisan'ny fiainana ny décolletage aloha, no bust anjara bar. Ny vehivavy eto dia nanontany ny antony mba hafeniny noho ny fanampian'ny iray Khimar.
manarona ny lohany
Ny iray amin'ireo mpaneho hevitra tahaka Bernström kilasika misy io dia Ibn Kathir (d. 1373) manazava ny teny hoe Khimar maneho zavatra izay mandrakotra sy izay ampiasaina mba handrakotra ny lohany. Mba hametahana ny efitra lamba dia midika hoe misintona azy manodidina ary ataovy azo antoka. Izany dia hatao eo amin'ny tendany sy ny tratrany ka na inona na inona mety hahitany izany. Ibn Kathir ihany koa ny mitanisa ny mpaminany ny finoana silamo Muhammad vadin'i 'A'ishah:
Enga anie ny fahasoavan'Andriamanitra ho eo ny vehivavy mpifindra monina tany am-boalohany. Avy eo Andriamanitra dia nanambara ny andininy: 'Koa aoka ireo no hanatona ny voaly handrakotra ny tratran'ny' dia nandriatra ny bodices ary nataony teo amboniny.
Ny tanjon 'ny efitra lamba sy ny akanjo silamo dia tsy mahasarika ny saina. Fa Izaho kosa milaza fa ny mifanohitra amin'izany. Ny masoko dia voasariky mivantana amin'ny akanjo isan-karazany sy ny voaly amin'ny vehivavy Silamo akanjo. Dia indray miseho eo amin'ny vahoaka.
To horantsanantsika dia heverina ho marina dia maro ny toe-javatra izay tokony ho nihaona. Anisan'izany ny:
Ary manarona ny vatana iray manontolo, araka ny voalaza etsy ambony.
Tsy tokony ho haingo fotsiny. Ny Upholstery lazaina amin'ny teny hafa, tsy manao zavatra tsy ilaina ny saina ho azy, izay mazava ho azy dia iray amin'ireo connotations 'ny andininy faha-24:31.
Ny fitafiana tsy tokony ho mangarahara.
Tokony ho tsy mifatotra, ary tsy niala foana ny hafa ka fa ireo maneho ny vatana amin'ny teny, na ho manitra.
Tsy tokony hitovy amin'ny lehilahy ny akanjo, na ny akanjo ny mpino.
Ny lehilahy akanjo
Ny mpiara-mitory Abu Umamah nilaza tamiko fa nandre ny Mpaminany Muhammad - fiadanana no hamely azy - hoe:
Miantoka ahy ny zavatra enina ary izaho dia miantoka anao Paradisa: rehefa miteny ny anankiray aminareo, dia tsy mba handainga; dia nankininy zavatra izy, dia tsy hamadika izany fitokisana; raha manao ny fampanantenana fa tsy handrava azy; hampidina ny masonao; misalasala ny tanana sy hiaro ny tsy miankina [vatana] faritra.
Toy ny misy fitsipika ho an'ny vehivavy ny akanjo ny fomba tokony ho mba ho marina, dia misy ihany koa ny vatsy ho an'ny olona ny akanjo. Anisan'izany fa ho afaka (Halal), izay midika ho ohatra fa tsy ho vita amin'ny landy, na volamena, rehefa misy fitaovana roa ireo dia natokana ho an'ny vehivavy. Tokony tsy ho manify ihany koa na mangarahara ka mampiseho iray amin'ireo faritra tena tsy mifanaraka mannan (awrā '). Tsy tokony hanahaka ny mpino akanjo sy ny soso-kevitra (mustahabb) mba manao akanjo fotsy. Ankoatra izany, dia voarara ny manao ihany koa izay mitsangana avy akanjo toy izany fa hisarika ny saina ho an'ny tenany sy ny mitondra dia fanta-daza sy malaza ho azy.
Ankizy kely manao voaly
Milaza izy ireo fa rehefa miditra ao mihalehibe ny ankizy, dia manao izany voaly, fa matetika aho no mahita ny ankizy manao voaly. Amin'izany fomba izany, ny ankizy dia lasa sexualized sy milaza nahy ny finoana silamo.
Mona Sahlin sy Lena Wallens Hjelm-tava
Tamin'ny 11 Septambra 2001 dia izay masiaka nahita fanafihan'ny mpampihorohoro ao amin'ny United States izay namono hatramin'ny 3000, ary namorona Amerikana ady mahatsiravina kokoa. Rehefa nanao ny mpikambana ao amin'ny Governemanta sy Lena Mona Sahlin Hjelm-Wallen ho Anarana moske amin'ny tava eo an-dohany. Mazava ho azy io tezitra be, ary mety ho toa toy ny asa tsy takatry ny saina.
Jereo ny sary: Mahmoud Aldebe, Lena Hjelm-Wallen sy Mona Sahlin taorian'ny 11 Septambra tao amin'ny fitsidihana ny trano fivavahana .
Raha tsara fanahy, tsy conspiratorial kokoa, dia angamba mba haneho ny fanohanany, fa amin'izao fotoana izao ny shawl dia fanekena ny finoana silamo, izay efa resahina amin'ny an-tsipiriany ato amin'ity lahatsoratra ity, izay ny tava na inona na inona, fa ny fanekena ny ny finoana silamo!
Inona araka ny hevitrao no silamo mihevitra raha nahita ny roa efa mihaingo hihaona shawl mpikambana ao amin'ny governemanta? Nihevitra izy ireo izy ireo ny Kristianina? Na niresaka momba azy ireo ny silamo? Izy ireo bar fijoroana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny shawls izy ireo silamo.
Ho vavolombelona fa Mona Sahlin dia Silamo
Fa ny zava-misy dia ny hoe misy ny vavolombelona, ​​na, fara fahakeliny, ny Soso-kevitra fa raha ny marina Mona Sahlin Silamo. Izany fijoroana ho vavolombelona dia avy amin'ny vehivavy Silamo Nalin Pekgul miatrika fifidianana ankapobeny:
"Nisy olona Mona Sahlin, ohatra, fa ho mifidy Tensta kokoa, satria ny hevitrao izy no mpiantoka ny zon'ny olon-kafa mba ho eto amin'ity firenena ity angamba noho ny maro hafa koa Silamo iza no tsy mifidy."
My sahy. ary:
"Tena faly aho fa izy (Sahlin)-tampon'ny ny lisitra satria mino izy, dia afaka mivarotra na vola ao amin'ny Tensta, fa angamba aho tsy hivarotra hafa silamo Toy izany koa"
Fitsidihana An'i Iran-panjakana tamin'ny 2017
Mifandray amin'ny governemanta fitsidihana an'i Iran tamin'ny Febroary 2017 nitondra ny vehivavy mpanompo efitra lamba. Io mazava ho azy dia tena hafahafa nomena fa ny vehivavy mpandray anjara any amin'ny firenena hafa 'fitsidihana-panjakana tsy nahatsapa voatery hanao toy izany koa.
Jereo ny sary: Mpanao fanompoam-pivavahana shawls.
Dia toy izany zavatra manan-tsahala ny soedoà delegasiona. Izany no afa-tsy ny fanehoana ny fiaraha-miory, na mandrobo? Moa ny fiaiken-keloka ho an'ny Silamo finoana?
Ann Linde voaly mampiseho ny politika
Ny minisitry vahiny amin'izao fotoana Ann Linde ny varotra ny manao ny efitra lamba tao Iran mitsidika 2017.
Maro no faly Kanefa na dia ny vaovao fa mety hametra-pialana Margot Wallström, kanefa ny fifaliana dia fohy ampy nomena fa Commerce Ann Linde eftertädde azy.
Izy tao an-fitsidihana an'i Iran tamin'ny Febroary 2017, ary voasarona ny tenany (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) niaraka tamin'ny vehivavy hafa minisitra. Mihevitra fa izy nandray ny fisalobonana ka manome Soso-kevitra izany fa tsy manavakavaka eo amin'ny ady teo amin'ny Israely sy ny Fahefana Palestiniana.
Izy tokoa manohitra ny Afovoany Atsinanana ihany ny demokrasia, ny Isiraely sy mandeha amin'ny nodimbiasany ny dian'i Wallström Margot.
2011 nanendry Palestiniana Association Ann Linde "taona Palestina" miaraka amin'ny ity fanambarana manaraka ity:
Ann Linde, noho ny asany sy ny fanoloran-tena, ny diany tany Palestina sy Israely, ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny roa tonta, nanasongadina ny Palestiniana 'zava-misy amin'ny lucidity, mazava sy ny herim-po, indrindra tato ho ato toy ny fanekena an'i Atsinanana Jerosalema ho renivohitry ny ho avy Palestiniana -panjakana sy ny fanekena an'i Palestina ho mpikambana isa 194 ao amin'ny Firenena Mikambana. Ann Linde ny tolona ho amin'ny fandriampahalemana sy ny rariny foana nanana mifantoka amin'ny lalàna iraisam-pirenena sy ny zon'olombelona fitsipika.
Ny efitra lamba dia maneho inona izany Afovoany Atsinanana politika, ny varotra mampihetsi-po izy. Dia hoy izy eto amin'ny demokrasia tao Tel Aviv Mazava ho azy tamin'ny 2008:
"Ny ady teo amin'ny Isiraely sy Palestina, toerana manan-danja indrindra dia fepetra takiana mialohan'ny ahafahana soa aman-tsara fa ny fibodoana Israeliana mifarana, izany no fanalahidin'ny manontolo azo Afovoany Atsinanana Nanjary-piadanana ao Amin'ny tari-dalana."
Mariho fa miresaka momba ny "Palestina" toy ny firenena efa tamin'ny 2008, roa taona talohan'ny fitondrana demokratika ara-tsosialy fantany ho toy ny firenena, na dia tsy firenena.
Ny efitra lamba dia tsy afaka hamonjy anareo
Ao Tehran, Iran lasa vehivavy 2018 nahazo sazy roa taona an-tranomaizina, noho ny heloka bevava silamo mba ampahibemaso nanaisotra ny voaly . Tamin'ny roa volana nosamborina 30 vehivavy ny antony fa efa nandà tsy hanao ny efitra lamba.
Ny lalàna momba ny fanaovana ny efitra lamba ho an'ny Silamo sy ny tsy silamo ny vehivavy ao Iran efa manan-kery ny fandatsahan-drà hatramin'ny revolisiona Islamika 1979th
Avelao aho milaza izany mazava tsara: ny efitra lamba dia tsy afaka hamonjy anareo. Kosa, dia fomba ny hampahory sy hifehy anao, na Silamo ianao na tsia.
Ny hany tena iray izay afaka hamonjy anao ka nametraka anao tanteraka maimaim-poana no Jesoa Kristy.
Andriamanitra dia tia anao
Andriamanitra dia tia ny olona rehetra, saingy tsy misy efitra lamba na afaka mamonjy na hampifaly an'Andriamanitra. Tokony ho voavonjy ianao, ary tena azafady Andriamanitra, dia tokony hanaiky ny Zanany Jesosy Kristy, Izay dia naniraka ho amin'izao tontolo izao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy anareo.
Jesosy dia mbola velona ankehitriny - efa nitsangana tamin'ny maty. Rehefa mandray Azy dia hovonjena, ary maimaim-poana. Tena mametraka i Jesoa Kristy ny olona maimaim-poana.
Koa ny Baiboly manondro ny efitra lamba na shawl, fa ao anatin'ity lohahevitra ity dia mazava fa tsy misy lalàna tsy misy fomba amam-panao. Jesosy no nanao ny olona afaka, tsy noho izy ireo indray mandeha indray handeha hatao amin'ny fahababoana, fa maimaim-poana izy ireo foana.
Mona Sahlin niova ho silamo?
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 12:35